China Kiwi mpanamboatra sy mpamatsy | Heritage
Kiwi dia i Sina dia avy amin'ny tanàna Zhouzhi miaraka amin'ny vokatra Geographic Indication. Antsoina koa hoe Gooseberry Sinoa izy io.
Kiwi dia malaza eran'izao tontolo izao. Manankarena vitamina sy asidra folika isan-karazany, carotene, calcium, lutein, asidra amine, inositol voajanahary, fantatra amin'ny anarana hoe mpanjakan'ny voankazo.
Heritage Food dia nanondrana firenena 20 mahery noho ny kalitao avo sy avo lenta.
Inona avy no soa azo avy amin'ny Kiwi maty Voankazo?
Ny kiwi mamy sy be ranony dia mety tsy ho azo ampiharina amin'ny fitehirizana maharitra na hisakafoanana eny an-dalana, koa hevero ny voankazo kiwi maina ho solony misy tombony maro. Ity voankazo tsy ampy rano ity dia ambany tavy, ambany kaloria kely ary manome mineraly sy fibre mahasalama. Matetika dia avo dia avo amin'ny siramamy ampiana, na izany aza, ka ampidiro ao amin'ny drafi-pisakafoanao raha misakafo siramamy ambany ianao.
Kaloria sy tavy
1.8-oz. ny fitaterana voankazo kiwi maina dia misy kaloria 180. Ity dia somary mihoatra lavitra noho ny fanompoana kiwi vaovao, izay manana kaloria 30. Ny ampahany amin'izany dia vokatry ny fanamainana ny voankazo, izay mifantoka ny kaloria sy ny otrikaina hafa. Satria mazàna rakotra siramamy ny kiwi maina, dia misy siramamy ampiana koa ireo kaloria voankazo maina. Na eo aza ny fitomboan'ny kaloria, ny fikarakarana voankazo kiwi maina dia safidy mety amin'ny fihinanan-tsakafo; Ny Diet Channel dia manolo-kevitra ny hihinana kaloria 100 ka hatramin'ny 200 ho an'ny tsakitsaky an-tsakafo. Ny fikarakarana kiwi maina dia misy koa tavy 0,5 g, kely dia kely izay mahatonga ity voankazo tsy ampy rano ity ho safidy tsara ho an'ny sakafo ambany tavy.
Ny voankazo kiwi maina dia safidy tsara hanamafisana ny fihinanana vy sy kalsioma anao. Ny iray amin'ireo voankazo ity dia manome 4 isan-jaton'ny kalsioma ilainao isan'andro. Ny kalsioma ao amin'ny kiwi maina dia manamafy ny hakitroky ny taolana sy ny tanjaka.
Teo aloha: paoma
Manaraka: Peach mavo
Kiwi voadio maty rano
Kiwi maty rano
Chip Kiwi maty rano
Voankazo Kiwi maty rano
Resipeo Kiwi tsy ampy rano
Voankazo voankazo Kiwi maina
Resaka Kiwi efa maina
Kiwi Kiwi voamaina